Bangkok Auto Show 2020 Kicks Off With Strict COVID-19 Rules
Models wearing face shields pose with an Audi TT RS Coupe during the media day of the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
People wearing face shields pose during the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
A model wearing a face shield poses with a Mitsubishi vehicle during the media day of the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Bangkok. (Image: Reuters)
A couple sits in a Mazda CX-5 during the 41st Bangkok International Motor Show, after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
Staff members wearing face masks stand next to a toilet during the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
A model leans against an Isuzu vehicle during the media day of the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
A worker carries a safety distance sign during the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
A customer sits inside a Lexus LM 300h during the media day of the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
A staff member cleans a vehicle during the media day of the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Bangkok. (Image: Reuters)
Customers are seen during the media day of the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
Saleswomen work during the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
Promoters work during the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
A general view during the 41st Bangkok International Motor Show, after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
A promoter wears a face shield during the 41st Bangkok International Motor Show after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
People are seen through the screen of a thermal scanner during the 41st Bangkok International Motor Show, after the Thai government eased measures to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Bangkok, Thailand. (Image: Reuters)
16 July 2020, 6:57 am
Thailand opened its twice-postponed annual auto show to the public in the country's first large-scale event since coronavirus restrictions eased, with nearly all attendees wearing masks and face shields.